10 Ebe Kasị Mma Mmiri Na Thewa | Save A Train
Home > Njem Iceland > 10 Ebe Kasị Mma Mmiri Na Thewa
10 Ebe Kasị Mma Mmiri Na Thewa
Train Travel Britain, Zụọnụ Travel China, Train Travel France, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Scotland, Train Travel UK, Travel Europe, Njem Iceland
Oge Ọgụgụ: 8 nkeji
(Emelitere ikpeazụ On: 16/07/2021)
N’ime ogbu mmiri, zoro ezo site na mmepeanya, na mgbe emetụbeghị, bụ 10 saịtị kacha mma mmiri na ụwa. Site na coral mara mma ma na-enwu gbaa ka ụgbọ mmiri WWII mebie, ndu oke osimiri, na oghere bulu, kwadebe ihe ndozi mmiri gị n'ihi na nnọkọ amị a ga-abụ nke na-atọ ụtọ.
Okporo ígwè Transport bụ The Eco-Enyi na Enyi Way To Travel. Isiokwu a na-e dere na-akụziri banyere Train Travel site Save A Train, The Weebụsaịtị ị ga-eji ụgbọ oloko dị ọnụ ala N'ụwa.
1. Ebe Kachasị Mma Na China: Nnukwu mgbidi
10 nde ndị njem nleta na-aga Great Wall of China kwa afọ, mana ole na ole maara na ha nwere ike ịbanye na otu n'ime saịtị kachasị ama ama n'ụwa. Ọ bụ ezie na ọtụtụ mmadụ na-aga ije na mgbidi mgbidi 21o00, eserese eserese maka mgbasa ozi mmekọrịta, Ọdọ mmiri Panjiakou bụ ebe mmiri na-agba mmiri. Nnukwu mgbidi nke China bụ naanị Ihe ijuanya nke ụwa, ị nwere ike n'ezie amaba n'ime.
O nwere ike ọ gaghị adọrọ mmasị ma maa mma dị ka mmiri na Indonesia ma ọ bụ Fiji, mana ị ga-eweghachi gị site n'echiche nke Nnukwu Mgbidi China. Ọ bụghị naanị na ị na-enwe mmasị na gburugburu ebe ahụ site n'elu, ma ichoputa ya site na nmalite, site na brik na elu, ihe owuwu nke guzoro ruo ọtụtụ puku afọ, lanarị mbibi okike, usoro eze, na mgbanwe ọchịchị.
Oge Kachasị Mma Dgba mmiri:
Vingmaba Nnukwu Mgbidi na China bụ ahụmịhe na-ama aka ọbụlagodi maka ndị nwere ọga n'ihu. Ihe kpatara ya bụ obere okpomọkụ, na-eru a kacha nke 10 ruo 11 Celsius, na 7 mita miri emi ke ndaeyo. Ya mere, oge kachasị mma maka imikpu na nnukwu mgbidi bụ naanị mgbe ị kwadebere nke ọma. Ihe ọzọ achọrọ bụ a zuru ezu nke kacha nta nke 100 ka 200 mmiri maka ntụrụndụ.
2. Ebe kacha mma mmiri na UK: Wales
Na ọgba, 500 emebi, na ebube oke osimiri, oke osimiri wales bu ebe di egwu maka imikpu mmiri. Ebe i nwere ike amaba ihe karịrị 50m na ​​mmiri nke Skomer, na Skokholm, na agwaetiti Middleholm. Ọhụhụ bụ otu n'ime ihe kachasị mma na mpaghara ahụ, na-enye gị ohere ịmasị ndụ oke osimiri mara mma ma chọpụta mbibi WWII ma ọ bụrụ na ị banye n'akụkọ ihe mere eme.
N'agbanyeghị na ụra na-atụ ya nwere, Wales bụ n'ezie ebe egwu mmiri dị egwu na Europe. Ọmụmaatụ, Skomer Marine Reserve na Pembrokeshire bụ otu n'ime ebe kacha mma mmiri na-agba na Wales: azụ okpo, dolphin, mmiri slugs na seahorses, bụ nanị ole na ole n'ime anụ ndị e kere eke ị ga-ezute.
Amsterdam Iji London Na A Train
Paris na London na A Train
Berlin na London na A Train
Brussels na London Na A Train
3. Best Diving Site In Italy: Portofino
na 20 ebe mmiri dị iche iche, Portofino karịrị otu maa mma ala gbara osimiri okirikiri obodo na Europe. Na mgbakwunye na ụlọ obibi mara mma, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na osimiri, n'ụsọ oké osimiri Ligurian bụ ebe egwu mmiri na Europe.
Firstly, Portofino Marine Reserve na-enye akuku mmiri dị egwu na mkpọmkpọ ebe maka ndị mbido na ndị nwere ụdị dị iche iche. Nke abuo, ihe oyiyi nke Kraịst, Kraịst nke abis bụ otu n'ime n'elu 5 Saịtị mmiri na Portofino. ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, ihe ndi Canada MOHAWK deer wreck bu ihe ozo na-egwu mmiri na 20-40 mita.
ikwubi, Ebe a na-egwu mmiri nke Portofino dị mma maka mmiri mmiri mbụ gị, ma chọpụta ihe ọzọ dị ịtụnanya eke iju ma ọ bụrụ na ị bụ onye nwere ahụmahụ amamịghe.
Milan Iji Portofino Na ụgbọ oloko
Venice Iji Portofino Na A Train
Florence Na Portofino Na ụgbọ oloko
Turin Iji Portofino Na ụgbọ oloko
4. Ebe Kachasị Mma Na France: Agwaetiti Guadeloupe nke French
Na paradaịs Caribbean, agwaetiti la Guadaloupe bụ obere mpempe akwụkwọ mmiri mmiri French. Obere agwaetiti a nwere La Grande Terre, na Petite Terre, ulo na ugwu mgbawa, igbo ohia, ala mara mma na osimiri, na nke kachasị mkpa bụ otu n'ime saịtị kacha mma na mmiri na Europe.
Agwaetiti Guadeloupe amaghi ama dika Bali ma obu Belize, ma ndụ mmiri ebe a ga-edebe gị n'okpuru mmiri maka ezumike gị niile. Cousteau Marine Reserve bụ saịtị kacha mma mmiri na Guadeloupe, ya na umu anumanu na osisi oma, tunnels, ọgba nduru, na ọtụtụ ebe zoro ezo maka onye na-egwu mmiri, na ndị mbido na-achọ ịnụ ụtọ ndụ oke osimiri na mmiri Caribbean.
Oge Kachasị Oge Togba Mmiri Na Guadeloupe Islands:
Mmiri mmiri dị na 23-28 Celsius C n'afọ niile na Guadeloupe, yabụ ị nwere ike ịbịa banye mmiri mmiri oge ọ bụla ịchọrọ.
Amsterdam na Paris na A Train
London na Paris na A Train
Rotterdam na Paris Na A Train
Brussels na Paris na A Train
5. Agwaetiti Orkney, Scotland
N'ime ahịhịa ndụ akwụkwọ ndụ, ugwu nta, na ugwu, Agwaetiti Orkney nwere akụkọ ihe mere eme kachasị mma na ụwa. nkịtị, enwere 7 ụgbọ mmiri na ala nke mmiri Orkney na Scotland. Ihe ndị a sitere na German High Seas Fleet na Scapa Flow, na 1919.
Na mgbakwunye na wrecks, e nwere ịtụnanya anụ ọhịa inyocha na mmiri doro anya. Dị ka ọmụmaatụ, mmiri nke Churchill Barriers na Yesnaby ma ọ bụ Inganess dị mma maka ịchọta ndụ mmiri dị n'ọhịa.
Oge Kachasị Oge Dgba Mmiri Na Orkney Islands:
Ista na Nọvemba, mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị 13 Celsius.
Florence na-eji ụgbọ oloko abịa
Milan iji Como na ụgbọ oloko
Turin iji Como na ụgbọ oloko
Genoa Jiri Como Na-abịa
6. Ebe Kasị Mma Mmiri Na Europe: Silfra, Iceland
N'etiti kọntinent abụọ, na obi Jehova Ogige Ntụrụndụ Thingvellir, mmiri kachasị dị ọcha na Iceland na-echere gị maka ahụmịhe mmiri ịtụnanya. Njirimara ala pụrụ iche na Silfra na-enye ọwara dị omimi na ọwara mmiri maka ndị nwere ụdị mmụta dị iche iche.
Ihe kacha atọ ụtọ banyere imikpu na Silfra bụ fissure. Uzo a bu uzo mmiri 2 cm ije nke North American na Eurasia tectonic plate. Emeburu nke a mgbe ala ọma jijiji mechara, mana nchekwa zuru oke maka mmiri ụbọchị ndị a, yabụ ị nwere ike ịmalite ịkwadebe maka ahụmịhe mmiri mmiri a na-agaghị echefu echefu na mmiri Icelandic.
Oke mmiri miri emi ekwe na Silfra bu 18 mita.
Dusseldorf gaa Munich Na A Train
Dresden gaa Munich Na A Train
Nuremberg na Munich Na A Train
Bonn ka Munich Na A Train
7. Ebe Kasị Mma Mmiri Na Thewa: Bali
Gburugburu aja aja, ụlọ arụsị, ugwu mgbawa, mmiri nke anwansi Bali bu ihe ijuanya nke uwa n'onwe ya. Obi abụọ adịghị ya, Bali bụ ebe magburu onwe ya maka ezumike na nke zuru oke maka mmiri.
Na Bali, ị nwere ike kewaa oge gị n’etiti ọtụtụ ebe imikpu mmiri maka na ha juru ebe niile. Site na coral ndị mara mma na nnukwu azụ, na ọgba ndị Buddha na-emetụ n'obi, Bali mmiri n'okpuru bụ ihe na-akpali akpali ma na-akpali akpali ụwa maka ndakpu mmiri na nsị.
Oge Kachasị Mma Dgba mmiri Na Bali:
Mee rue Nọvemba bu oge iku mmiri na Bali, na oge kacha mma iji hụ Manta Rays bụ Eprel ruo Mee.
Salzburg na ụgbọ oloko na Vienna
Munich na Vienna Na A Train
Graz na ụgbọ okporo ígwè na Vienna
Prague na ụgbọ oloko na Vienna
8. Ebe Kasị Mma Mmiri Na Thewa: Oghere Na-acha anụnụ anụnụ Na Belize
125 mita miri emi, okirikiri ke udi, na iji ebube igwe, Ebe a na-agba mmiri na Blue Hole na Belize, bụ otu nke n'elu 10 ga-abanye na saịtị ntanetị n'ime ụwa. Nnukwu oghere a dị n’akụkụ Lighthouse Reef na Belize, na ọhụhụ dị mma, ị nwere ike ịchọta onwe gị na njem njem a na-agaghị echefu echefu.
N'adịghị ka saịtị ndị ọzọ kachasị mma mmiri na ndepụta anyị, Blue Hole abụghị ebe ọkpụkpụ Balinese, ndụ mmiri dị obere, ma ọ bụ iyi mara mma. Ihe ichotara bu ihe ima aka ma di uto, nke ahụ ga-eme ka ị banye n'ọkwa divemaster ọzọ.
Oge Kachasị Mma Dgbaba Na Oghere Blue:
Eprel ruo June kacha mma maka shark shark na-ekiri na mmiri.
Nuremberg na ụgbọ oloko na Prague
Munich na ụgbọ oloko na Prague
Berlin na Prague na ụgbọ oloko
Vienna na ụgbọ oloko na Prague
9. Raja Ampat |: Mmiri mmiri na njedebe nke ụwa
Zere na mmepeanya ruo 2004, Raja Ampat bụ paradaịs zoro ezo, dị n'etiti Indonesia na Australia. N'ihi nchọpụta nke ikpeazụ a, anụ ọhịa mmiri dị na Raja Ampat bụ otu n'ime anụ ọhịa kachasị n'ụwa.
Mgbe ị na-amaba na Raja Ampat, ị ga-achọpụta n'elu 600 ụdị nke coral siri ike naanị, na mgbakwunye na ndụ mara mma na nke ụwa a. Uniquewa a pụrụ iche dị n'etiti 4 agwaetiti ndị bụ isi: Waigei, Batanta, Salawati, na Misool n'ime ime obodo West Papua.
Y’oburu n’etiti ndi nke ozo di elu, mgbe ahụ ịkwesịrị ịde akwụkwọ ezumike ezumike gị ọzọ na Raja Ampat.
Oge Kachasị Oge Dgba Mmiri Na Raje Ampat:
Nọvemba rue Eprel na ọnọdụ okpomọkụ sitere na 27 ka 30 Celsius C.
Jiri Zurich gaa Wengen
Geneva ka Wengen jiri ụgbọ oloko
Bern na Wengen nwere ụgbọ oloko
Basel gaa Wengen Na Traingbọ oloko
10. Ebe Kachasị Mma Mmiri Na China: Shi Cheng Obodo Oge Ochie Na Qiandao Lake
Dị omimi na Puku Ọdọ Mmiri Islands, na mpaghara Zhejiang, na obodo ochie nke Shi Cheng ụgha. Na omimi nke 40 mita, ị ga-achọpụta ihe ịtụnanya nke obodo China furu efu. N'agbanyeghị mmiri ọkụ na oge gafere, atụmatụ ụlọ nke obodo ahụ, na ọbụnadị nkọwapụta osisi ka echekwara nke ọma.
N'ihi ihe ndị a, obodo Shi Cheng bụ paradaịs zoro ezo maka ndị dị iche iche. Ọtụtụ na-abịa ịchọpụta ịma mma nke Ọdọ Mmiri Qiandao, ma nke a furu efu obodo bụ otu ihe ọzọ dị ịtụnanya mere njem. Idei mmiri rikpuru obodo na ndagwurugwu ahụ 1959, ma ọ bụ kpam kpam nchebe maka mmiri.
Oge Kachasị Oge Togba Mmiri Na Shi Cheng:
Fada, ekele akọrọ na-ekpo ọkụ idụhe.
Dijon to Provence With A Train
Paris na Provence na A Train
Lyon na Provence na a ụgbọ oloko
Marseilles iji Provence na ụgbọ oloko
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka Akpara-agaghị echefu echefu njem ka 10 kasị mma mmiri saịtị na ụwa ụgbọ okporo ígwè.
You chọrọ Embed anyị blog post “1o Best mmiri saịtị Na World" jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Fbest-diving-sites-world%2F- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml.
Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, ma ị nwere ike ịgbanwe / ru ka / fr ma ọ bụ / es na ọtụtụ asụsụ.
BeautifulSeaLife bestdivingsiteseurope bestdivingsitesworldwide dive diving DivingSites DivingVacation MarineWildLife ScubaDiving SeaLife
Abụ m onye edemede nwere mmasị, Onye na-eme njem egwu na onye na-ede blọgụ. Ekwenyere m na asụsụ na okwu bụ ngwaọrụ dị ike nke nwere ike ịkpali ma mepụta ụwa ọhụụ. Ọ na-amasị m ịme njem na ịkekọrịta njem m site na akụkọ m na ụmụ nwanyị ndị ọzọ gburugburu ụwa - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m
Ingbọ oloko na Belgium, Zụọnụ Travel China, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Holland, Inzọ Njem Italytali, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
Beach Ememe Site Train Na Belgium
Njem ụgbọ oloko, Ingbọ oloko na Belgium, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe
Gịnị mere unu ga-ejegharị Na Europe Na Spring
Njem ụgbọ oloko, Train Travel France, Train Travel Hungary, Inzọ Njem Italytali, Ingbọ ologo Spain, Travel Europe